Hanome Valisoa (Vola) Mihoam-pampana Hoan’izay Mahafaty Ny Tompon’ny Charlie Hebdo Ilay Mpanao Lalàna Pakistaney · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 10 Febroary 2015 10:15 GMT
Haji Ghulam Ahmed Bilour, mpanao lalàna federaly Pakistaney, noraisin-tsary ho tahaka ny Mpirahalahy Mpamono olona. Sary nafangorin'i Kevin Rothrock.
Nanambara i Haji Ghulam Ahmed Bilour, mpanao lalàna federaly Pakistaney vao haingana fa omena valisoa 200.000 dolara amerikana izay olona mamono mahafaty ny tompon'ny gazetiboky Frantsay mpanesoeso, Charlie Hebdo, noho ny fandefasana tantara an-tsary “fitenenan-dratsy fivavahana”.
Nilaza izany teo amin'ny polipitran'ny Antenimieram-Pirenena i Bilour nandritra ny adihevitra momba ny fanafihana vao haingana tao amin'ny moske Shiita ao Sikarpur, fanafihana izay nahafatesana olona efa ho 60. Mpanao lalàna zokiolona ao amin'ny antokon'ny mpanohitra Awami National (ANP) avy ao Kyber-Pakhtoonkhwa – faritany voakasiky ny herisetra tato ho ato izy. Nanambara tena ny antokony ANP fa hanaraka ny soatoavina lahika sy liberaly ka namoy mpikambana maro tao amin'ny antoko nandritra ny nifanaovany tamin'ny Tehrik-i-Taliban Pakistana sy ireo vondrona mitam-piadiana sy maherisetra. Tamin'ny fiandohan'ny taona 2012, nanolotra valisoa 100,000 dolara hoan'izay mahita na mamono ilay mpanatontosa horonantsari-mihetsika mamely ny Miozolomana tely teti-bola “Innocence of Muslims” [Tsy Fahalalàna Miozolomana] tao amin'ny Youtube i Bilour .
Tamin'ny kabariny tao amin'ny Antenimieram-pirenena tamin'ny 2 Febroary, nanambara i Bilour fa vonona hanolotra valisoa fanampiny 100.000 dolara Amerikana hoan'izay mpandova an'izy telo lahy nanatanteraka ny fanafihana tany Paris ary namoy ny ainy tamin'ny fifandonana tamin'ny polisy frantsay – ny roa namono ny tonian-dahatsoratry Charlie Hebdo sy ireo mpanao sariitatra roa hafa, ary ny iray nanatanteraka fitànana ankeriny tao amin'ny fivarotan'ny Jiosy ao Paris. Nahafaty olona fito ambin'ny folo nandritra ny tontolo andro izy telo lahy.
Iray amin'ireo gazety goavana mpivoaka isan'andro amin'ny teny Anglisy ao Pakistana niantso izany ho “Ny dokambarotr'i Bilour: valisoa hoan'ireo mpandovan'ireo mpanafika an'i Charlie”
Lahatsoratra tamin'ny gazety hafa amin'ny teny Anglisy, The Express Tribune, nanipika hoe:
Tamin'ny fotoana niadian'izao tontolo izao hevitra mikasika ny fihanaky ny extremisma sy ny fanavakavahana, sy ny fieritreretana indray ny fandraisana Miozolomana [any amin'ny firenen-tsamihafa], dia misy solombavambahoaka Pakistaney iray mandrisika famonoan'olona.
Araka ny filazan'ireo manam-pahaizana momba ny lalàna, mandràra ny fanomezana valisoa ny fehezan-dalàna momba ny famingavingana fivavahana araka ny Lalàna Famaizana Pakistaney – tokony hisy ny fanasazian'ny fanjakana. Raha mandrahona na manorisory olona i Bailour, dia azo henjehina araka ny lalàna mifehy ny heloka bevava ary toriana amin'ny alalan'ny lalàna sivily noho ny fahavoazana.
Vola be ao Pakistana ny 200.000 dolara ary maro ireo Pakistaney no manontany ny fiavian'izany volabe izany? Mampiseho mihitsy aza ny fandoavan-ketran'i Bilour fa tsy manana izany volabe izany izy.
Omar R. Quraishi no tonian-dahatsoratra ao amin'ny Express Tribune:
Nanolotra valisoa 200.000 dolara (Rs 2 crores) hoan'izay mamono ny tompon'i Charlie Hebdo i MNA Ghulam Ahmad Bilour – tamin'ny 2013, nandoa vola Rs 40.698 ho fandoavan-ketra izy.
Manana trano fandefasana horonantsari-mihetsika “Shama” malaza ratsy ao Peshawar ny fianakaviana Bilour. Fantatra amin'ny fandefasana horonantsari-mihetsika vetaveta ao afovoan-tanàna izany trano sinema izany. Na dia teo aza ny famonoana mpianatra mampivara-hontsana tao amin'ny sekoly miaramila tany Peshawar izay nataon'ireo mpikambana ao amin'ny Talibana Pakistaney tamin'ny volana Desambra 2014, mbola mahazo mpijery ihany izy ary feno hatrany ny trano.
Abbas Nasir, tonian-dahatsoratra teo aloha tao amin'ny Dawn sady mpanoratra gazety nisioka an-tarehy ratsy miresaka momba ilay trano sinema tsy ara-dalàna mpandefa sarimihetsika vetaveta na totas ao Peshawar:
Mihevitra aho fa tokony hanome valisoa hoan'izay misambotra ny tompon'ny trano sinema ao Peshawar izay manao zavatra tsy Islamika sy mandefa “totas” amin'ny fandefasan-tsary i Bilour Sb.
Nizara ny heviny ilay mpisera Facebook Javed Akram.
Manaraka ny fampianaran'i Khan Abdul Ghaffar Khan, fantatry ny vahoakany am-pitiavana hoe Baacha Khan – Miozolomana mafana fo mpanara-dia an'i Gandhi sy nitory filaminana sy tsy fanaovana herisetra ho foto-keviny voalohany ny Antoko Awami na ANP misy an'i Bilour.
Yasser Latif Hamdani, mpikatroka ny zon'olombelona sady mpisolo ava nanontany ny politikan'ny antoko momba izany:
ANP Wallahs, azafady azavao izao:izao ve ny “tsy fanaovana herisetra” na “mahalaïka anareo”?
Sarotra ny milaza raha fisehosehoan'i PR izany na antso avy amin'ny Miozolomana tsara. Tsy misy ny fanamelohana avy amin'ny mpikambana hafa ao amin'ny parlemanta na ny ANP mikasika ny fanambaran'i Bilour. Mitondra any amin'ny fanamelohana ho faty ho an'izay manevateva ny Islam, ny mpaminany Muhammad na ny fianakaviany ny lalàna momba ny fitenenan-dratsy fivavahana ao Pakistana. Olona teo amin'ny 1.274 teo no voampanga ho nanao fitenenan-dratsy fivavahana tao Pakistana tanelanelan'ny taona 1986 ka hatramin'ny 2010.